यी हुन् खुसी रहन अपनाउनुपर्ने पाँच उपाय – Tourism News Portal of Nepal
यी हुन् खुसी रहन अपनाउनुपर्ने पाँच उपाय
मानिसको दिमागलाई के कुराले खुसी बनाउँछ त? अथवा एक व्यक्तिले बढी खुसी प्राप्त गर्न कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? एक न्युरो साइन्टिस्ट एलेक्स कर्बका अनुसार खुसी हुनका लागि मानिसले निम्न पाँच कुरामा ध्यान दिनुपर्छः
हालै सार्वजनिक भएको ‘वर्ल्ड ह्याप्पीनेस रिपोर्ट’ का अनुसार नर्वे विश्वको सबैभन्दा खुसी देश बनेको छ। नेपाल ९९ औँ स्थानमा रहेको सो सूचीको अग्रपंक्तिमा प्रायः नर्डिक देशहरु छन्। त्यहाँका मानिसमा रहेको सामुदायिक भावनाका कारण मानिसहरु सबैभन्दा खुसी रहने सो रिपोर्टले जनाएको थियो।
१. सबैभन्दा खुसी भएको बेला सुनेको संगीत सुन्नुहोस्
संगीतले मानिसको दिमागलाई अनौठो तरिकाले प्रभावित गर्दछ। कुनै समयमा सुनेको संगीत निकै पछि तपाईंले सुन्नुभयो भने पनि पुरानो स्थानको सम्झना दिलाउने शक्ति संगीतमा हुन्छ।
त्यसैले तपाईंले आफ्नो सबैभन्दा रमाइलो समय कलेजमा बिताउनुभएको थियो भने त्यस समय तपाईंलाई मन परेको संगीत फेरि सुन्नुहोस्। यसले तपाईंको मुडमा परिवर्तन गर्न सक्छ। यसले आफ्नो खुसीको समयमा तपाईंलाई जोड्न सक्छ।
२. मुस्कुराउनुहोस् र सनग्लास लगाउनुहोस्
मानिसको दिमाग सँधै उत्तिकै तीक्ष्ण हुँदैन। यसले गर्दा दिमागले शरीरबाट प्राप्त गरिरहेको संकेतहरुलाई राम्रोसँग बुझ्न सकिरहेको हुँदैन। परिणामस्वरुप तपाईं खुसी हुने कि दुःखी स्पष्ट हुँदैन। यस्तो बेलामा ‘बायोफिडब्याक’को आवश्यकता हुन्छ। एलेक्सका अनुसार बायोफिडब्याक भनेको शरीरले मस्तिष्कलाई पठाउने संकेत हो, जसले तपाईंलाई कस्तो महसुस गर्ने भन्ने कुरा बताउँछ।
त्यसैले यदि तपाईंको मन भारी छ भने झुठै भए पनि मुस्कुराउन एलेक्स सुझाव दिन्छन्। यसले तपाईंको भावना परिवर्तन गर्न सहयोग गर्छ।
एक अध्ययनअनुसार मुस्कुराउँदा २ हजार चकलेट वा २५ हजार डलर प्राप्त गर्दा हुने जति नै खुसी मानिसको दिमागले प्राप्त गर्दछ।
उसोभए सनग्लास चाहिँ किन त?
चम्किलो प्रकाशमा हेर्दा हामीले आँखा सानो बनाउँछौँ। आँखा सानो बनाउँदा हामी चिन्तित भएजस्तो देखिन्छौँ। यसको बायोफिडब्याक पक्कै पनि नकारात्मक जाने गर्दछ। त्यसैले यसलाई छल्नका लागि सनग्लासको जरुरत पर्दछ।
त्यसैले मुस्कुराउनुहोस् र सनग्लास लगानुहोस्। पक्कै पनि हँसिलो अनुहारमा सनग्लास झनै सुहाउला।
३. आफ्नो उद्देश्यबारे सोच्नुहोस्
विभिन्न अध्ययनहरुले के पुष्टि गरेका छन् भने स्पष्ट उद्देश्य राख्दा संसारलाई हेर्ने तरिका बदलिने गर्दछ। त्यसैले तनाव वा चुनौती महसुस गरिरहनुभएको छ भने तपाईं आफ्नो उद्देश्यका बारे सोच्न थाल्नुहोस्। यसले तपाईंको मस्तिष्कमा नियन्त्रणको भावनालाई जगाउँछ र तपाईं प्रेरित बन्न सक्नुहुन्छ।
४. पर्याप्त सुत्नुहोस्
डिप्रेसनका बिरामी प्रायः राम्ररी निदाउन सक्दैनन्। तर यो पनि साँचो हो कि पर्याप्त निद्राको अभावमा पनि मानिस डिप्रेसनको शिकार हुनसक्छ। पर्याप्त र गहिरो निद्राका लागि केही उपायहरु अपनाउन सकिन्छ।
एलेक्सका अनुसार दिउँसो उज्यालो घाममा निस्किने र सुत्ने बेलामा मधुरो उज्यालोमा बस्ने कोशिस गर्नुपर्छ। आरामदायी ओच्छ्यान र सुत्ने सही समयको ख्याल गर्नु राम्रो हुन्छ। हरेक दिन उही समयमा सुत्नाले निदाउन सहज हुने गर्दछ।
५. तनाव घटाउनुहोस्
समयमै सक्नुपर्ने काममा अनावश्यक ढिलाइ हुँदा तपाईंले धेरै समस्या भोग्नुपरेको होला। यस्ता समस्याबाट उन्मुक्ति पाउने उपाय भनेको राम्रो बानीको विकास गर्ने र ढिलाइलाई रोक्ने हो। यी दुवै कुरा गर्नका लागि तनाव घटाउन सक्नुपर्छ। किनभने ढिलाइ र असफलताले तपाईंलाई तनावतिर डो¥याउँछ भने तनावले ढिलाइ र असफलतातिर। यो चक्रव्युहजस्तो हुन्छ।
त्यसोभए के गर्ने त? काम सुरु गर्नुहोस् र तनाव घटाउन जे गर्नुपर्छ त्यो गर्नुहोस्। तनावको चक्करमा नपरी आफैँलाई सोध्नुहोस्, यसबाट मुक्त म के गर्न सक्छु?
यसले तपाईंको चिन्तालाई पर राखी खुसीको वातावरण कायम राख्न सघाउँछ। एजेन्सी